induction Kumanikidza Midziyo Kuchenesa Sisitimu yeMidziyo uye Batch Reactor
musha / Applications / Induction Kuchenesa Reactor / induction Kumanikidza Midziyo Kupisa
Category: Induction Kuchenesa Reactor Tags: batch midziyo kudziyisa, induction kupisa kumanikidza midziyo, Induction kupisa maitiro midziyo hita, induction kupisa tangi, kumanikidza midziyo, kumanikidza midziyo hita, Pressure Midziyo Heating, Maitiro Midziyo kudziyisa, Kugadzika Matangi Heating, Kuchengetedza Kuchenesa
Induction Kumanikidza Midziyo Kuchenesa-Batch Reactors-Kuchengeta uye Kugadzika Matangi Kuchenesa
Induction kumanikidza midziyo yekupisa sisitimu yeReactors neKettles, Autoclaves, Maitiro Ekushongedza, Kuchengeta uye Kugadzika Matangi, Mabhati, maVheti uye Zvichiri Hari, Midziyo yekumanikidza, Vapourisors uye superheater, Heat Exchangers, Rotary Drum, Pipes, Dual Fuel Heated Midziyo uye makemikari midziyo ndiyo yakanyanya yepamusoro kupisa nzira inowanikwa chero inoyerera kugadzira.
Tine induction Heating muchina kubva 1 KW ~ 500KW. Iyo yekupisa tembiricha 0 ～ 650 C. Tinogona kugadzira yakakodzera induction yekupisa muchina kune akasiyana mhando reactor.
Iko kunakirwa kweiyo induction kupisa kweiyo reacor kudziyisa:
1.Kurumidza kudziyisa kumhanya ine yakanyanya kudziya maitiro
2. Hapana hukama hwepanyama pakati peiyo induction coil uye inopisa mudziyo wemadziro
3. Instant kutanga-up uye kuvhara-pasi; hapana inertia yekupisa
4. Low kupisa kurasikirwa
5.Custom chigadzirwa uye mudziyo wemadziro tembiricha kutonga pasina pamusoro pekupfura
6. Kuwedzera simba kwesimba, kwakanakira otomatiki kana micro-processor kutonga
7. Nzvimbo ine njodzi yakachengeteka kana yakajairika maindasitiri mashandiro pamutsetse voltage
8. Kusvibisa yemahara yunifomu kudziyisa pakakwirira kushanda
9. Low kumhanya mari
10. Kutonhora kwakadzika kana kwakakwirira
11.Yakareruka uye inochinja kuti ishande
12. Kugadziriswa kushoma
13. Unhu hwechigadzirwa hunoenderana
14. Heater inozvimiririra-iine yega pevhu nzvimbo chinodiwa
15. Yakachengeteka uye yakagadzikana kwemaawa makumi maviri nemana ichishanda & Kupfuura makore gumi ekushanda hupenyu
Induction Kuchenesa coil dhizaini inowanikwa kutenderana nesimbi mudziyo uye matangi emafomu mazhinji uye maumbirwo anotangira pamasentimita mashoma kusvika kumamita akati wandei pakureba kana kureba. Simbi yakapfava, yakapfeka simbi yakapfava, yakasimba simbi isina simbi kana ngarava dzisina feri dzinogona kuvezwa zvinobudirira. Kazhinji hushoma hwemadziro ekureba e6 ~ 10mm inokurudzirwa.
The induction weld preheating muchina dzinosanganisira:
1. induction kudziyisa simba.
2. Induction kudziyisa coil.
3. Wedzera tambo
4. K mhando thermocouple zvichingodaro.
Induction kudziyisa inopa mabhenefiti asingawanikwe mune mamwe masisitimu: akavandudzwa ekugadzirwa kwezvirimwa uye zvirinani mashandiro ezvinhu pasina chakakosha kubuda kwekupisa kunzvimbo dzakatenderedza.
Chaiwo maindasitiri anoshandisa induction maitiro kupisa:
• Reactors uye ketero.
• Inonamira uye yakakosha machira.
• Makemikari, gasi uye mafuta.
• Kugadzirwa kwechikafu.
• Metallurgical nesimbi kupedza uye zvichingodaro.
HLQ Induction Pressure Midziyo Heating System Mugadziri
Tine makore anopfuura makumi maviri ruzivo mu induction heat uye zvakagadzira, zvakagadzirwa, zvakagadzirwa, zvakaiswa uye zvakatumirwa Vessel uye Pipe Heating masisitimu kune nyika zhinji pasirese. Nekuda kweiyo yekudziya sisitimu iri nyore zvakasununguka uye yakavimbika kwazvo, iyo sarudzo yekudziya ne induction inofanirwa kutorwa senge inosarudzwa sarudzo. Induction kudziyisa kunosanganisira ese mashongedzero emagetsi akatorwa akananga kunzira uye oshandurwa kuita kudziya chaiko panodiwa. Inogona kuiswa zvinobudirira kune chero mudziyo kana pombi sisitimu inoda sosi yekupisa.
Induction inopa mabhenefiti mazhinji asingawanikwe nedzimwe nzira uye inopa yakagadziriswa kugadzirwa kwekudyara uye zvirinani mashandiro ezvinhu sezvo pasina chakakosha kubuda kwekupisa kumatunhu akakomberedza. Iyo sisitimu inonyanya kukodzera padhuze kudzora maitiro maitiro sekugadzirwa kweyakagadzirwa resini munzvimbo yeHazard.
Sezvo imwe neimwe induction kudziyisa mudziyo iri bespoke kune yega yega vatengi zvido nezvinodiwa, isu tinopa akasiyana saizi nekusiyana kwekupisa mitengo. Mainjiniya edu ave nemakore mazhinji echiitiko mukuchinja kwetsika yakavakwa induction heat systems yemhando dzakasiyana siyana dzekushandisa mune dzakasiyana maindasitiri Heater dzakagadzirwa kuti dzienderane nezvinodiwa chaizvo zveichi chiitiko uye zvakavakirwa kukasira kukodzera pamudziyo kungave mumabasa edu kana pane saiti.
• Hapana kubatana kwepanyama pakati peiyo induction coil uye inopisa mudziyo wemadziro.
• Inokurumidza kutanga-up uye kuvhara-pasi. Hapana inertia yekupisa.
• Kuderera kupisa kupisa
• Precision chigadzirwa uye mudziyo wemadziro tembiricha kutonga pasina pamusoro pekupfura.
• Kuwedzera kwesimba. Yakanakira otomatiki kana micro-processor kutonga
• Nzvimbo ine njodzi yakachengeteka kana yakajairika maindasitiri mashandiro pamhepo voltage.
• Inosvibisa yemahara yunifomu kudziyisa pakakwirira kushanda.
• Mari yekumhanya yakaderera.
• Yakadzika kana yakanyanya tembiricha inoshanda.
• Zvakareruka uye zvinopfava kushanda.
• Kugadziriswa kushoma.
• Unhu hwechigadzirwa hunoenderana.
• Heater inozvidzivirira pamudziyo unogadzira yakaderera nzvimbo nzvimbo chinodiwa.
Induction Kuchenesa coil dhizaini inowanikwa kutenderana nesimbi midziyo uye matangi emafomu mazhinji uye maumbirwo mukushandisa kwazvino. Kutangira kubva pamazana mashoma kusvika kumamirimita akati wandei kana kureba. Simbi yakapfava, yakapfeka simbi yakapfava, yakasimba simbi isina simbi kana ngarava dzisiri dzese dzinogona kuvezwa zvinobudirira. Kazhinji hushoma hwemadziro ekureba e6mm inokurudzirwa.
Chikamu cheyuniti dhizaini kubva pa1KW kusvika 1500KW. Iine induction yekudziya masisitimu hapana muganho pane simba rehuwandu hwekuisa. Chero kukamurwa kuripo kunoiswa nehukuru hwekupisa hunyanzvi hwechigadzirwa, maitiro kana metallurgia hunhu hwemidziyo yemadziro.
Induction kudziyisa kunosanganisira ese mashongedzero emagetsi akatorwa akananga kunzira uye oshandurwa kuita kudziya chaiko panodiwa. Sezvo kudziya kuchiitika zvakananga mumadziro emidziyo zvichisangana nechigadzirwa uye kurasikirwa kwekupisa kwakaderera zvakanyanya, iyo sisitimu inoshanda zvakanyanya (kusvika 90%).
Induction Heating inopa yakawanda yakawanda mabhenefiti asingawanikwe nedzimwe nzira uye inopa yakagadziridzwa yekugadzira zvirimwa kugona uye zvirinani mashandiro ezvinhu sezvo pasina chakakosha kubuda kwekupisa kune zvakapoteredza.
• Reactors uye ketero
• Inonamira uye yakakosha machira
• Makemikari, gasi uye mafuta
• Metallurgical nesimbi yekupedzisa
• Kupisa kwevhu
Kukodzera & Kusakodzera
• Kudya Kuomesa
• Mapaipi Pombi Inopisa
• Tangi & Mudziyo Heating uye Insulation
Iyo HLQ Induction In-Line Heater kurongeka inogona kushandiswa kune maficha anosanganisira:
• Mhepo neGesi kudziyisa kweKemikari uye Kudya Kugadziriswa
• Mafuta Anopisa Anopisa Maitiro uye Mafuta Anodyiwa
Kuisa maVaporising uye Kupisa: Instant steam kusimudza, yakadzika uye yakanyanya tembiricha / kumanikidza (kusvika ku800ºC pa100 bar)
Yapfuura Vessel uye Inoenderera Heater mapurojekiti anosanganisira:
Reactors neKettles, Autoclaves, Maitiro Ekushongedza, Kuchengeta uye Kugadzika Matangi, Mabhati, Vats uye Zvichiri Hari, Midziyo yekumanikidza, Vapourisors uye superheater, Heat Exchangers, Rotary Drum, Pipes, Dual Fuel Heated Midziyo
Yapfuura In-Line Heater chirongwa chinosanganisira:
High Pressure Super Heated Steam heaters, Regenerative Air Heaters, Lubricating Oil Heaters, Edible Oil and Cooking Oil Heater, Heater heater anosanganisira Nitrogen, Nitrogen Argon uye Catalytic Rich Gas (CRG) heater.
Induction Kutya inzira isiri yekudyidzana yekusarudza kupisa magetsi-kuitisa zvinhu nekushandisa imwe simba remagineti kuti ibudise magetsi emagetsi, anozivikanwa seaddy yazvino, mune izvo zvinhu, anozivikanwa se susceptor, nokudaro achipisa iyo susceptor. Induction kudziyisa kwave kuchishandiswa mune yesimbi indasitiri kwemakore mazhinji nechinangwa chekudziisa simbi, semuenzaniso, kusungunuka, kunatsa, kupisa kupisa, kupisa, uye kugadzira. Induction kudziyisa kunoitwa pamusoro pehuwandu hwakawanda hwehuwandu, kubva ku AC powerline frequency yakaderera se50 Hz kusvika kumasvomhu emakumi emakumi eMHz.
Pane yakapihwa induction frequency iyo yekudziya mashandiro eiyo induction munda inowedzera kana iyo yakareba conduction nzira iripo mune chinhu. Makuru mahombe ebasa zvidimbu anogona kudziirwa neakadzika mafurati, nepo zvinhu zvidiki zvinoda mwero wepamusoro. Kuti chinhu chakapihwa saizi chipisirwe, yakaderera zvakanyanya frequency inopa kupisa kusingakwanise sezvo simba riri mumunda wekusvitsa hariburitse kusimba kunodiwa kwemasaisai eddy muchinhu. Yakanyanya kukwirisa frequency, kune rimwe divi, inokonzeresa-yunifomu kudziya sezvo simba riri induction munda risingapinde muchinhu uye eddy mafungu anongofambiswa mukati kana padyo nepasi. Nekudaro, kupisa induction kwegesi-inokwenenzverwa simbi zvivakwa hazvizivikanwe mune yepamberi hunyanzvi.
Pamberi pehunyanzvi maitiro eiyo gasi chikamu chinogadzirisa maitiro chinoda kuti iyo inokonzeresa ive nepamusoro penzvimbo nzvimbo kuitira kuti iyo inogadzikisa gasi mamorekuru kuti ave nehupamhi hwekusangana neicho chinokonzeresa pamusoro. Maitiro epamberi ehunyanzvi anowanzoshandisa chero chinhu chinogumbusa chinogadzira zvinhu kana zvidiki zvidiki zvinotsigisa, zvinotsigirwa zvakakodzera, kuzadzisa nzvimbo inodiwa pamusoro. Aya maitiro epamberi ehunyanzvi anovimba nekutenderera, radiation kana convection kuti ipe iyo inodikanwa kupisa kune iyo catalyst. Kuti uwane kusarudzika kwakanaka kwemakemikari maitiro ese zvikamu zveanogadziridza anofanirwa kuona tembiricha yunifomu uye nharaunda inokonzeresa. Zvekuguma kwekupedzisira, iwo mwero wekutumira kupisa saka unofanirwa kuve wakaenzana seunobvira pamusoro pevhoriyamu rese remubhedha unobatsira. Ose ma conduction, uye convection, pamwe nemwaranzi, zvakaganhurirwa mukugona kwavo kupa chiyero chakakodzera uye kufanana kwekutumira kupisa.
GB Patent 2210286 (GB '286), inova hunyanzvi hwepamberi, inodzidzisa kukwirisa zvidiki zvinokonzeresa izvo zvisingaitisi zvemagetsi pane rutsigiro rwesimbi kana doping iyo inokonzeresa kuti iitise nemagetsi kuitisa. Iyo simbi rutsigiro kana iyo doping zvinhu ndeye induction inopisa uye iyozve inopisa iyo inokonzeresa. Iyi patent inodzidzisa kushandiswa kweiyo ferromagnetic kiyi inopfuura nepakati nepakati pekuvata mubhedha. Izvo zvakasarudzika zvinhu zveiyo ferromagnetic musimboti isilicon simbi. Kunyangwe ichibatsira pakuita zvinosvika mazana matanhatu emadigiri C., zvishandiso zveGG Patent 600 zvinotambura nekukanganisa kwakanyanya kumatembiricha akakwirira. Iyo yemagineti kukwana kweiyo ferromagnetic musimboti yaizodzikira zvakanyanya kumatunhu akakwirira. Sekureva kwaErickson, CJ, "Handbook of Heating for Industry", mapeji 2210286-84, iyo magnetic permeability yesimbi inotanga kudzikira pa85 C uye yaenda nemazvo na 600 C. Sezvo, mukurongeka kweGG '750, iyo magnetic munda mumubhedha we catalyst unoenderana nemagineti kukwana kweiyo ferromagnetic musimboti, gadziriro yakadaro yaisazopisa zvinokonzeresa kune tembiricha inopfuura 286 C, ndoda kusvika pane yakakura kupfuura 750 C inodikanwa mukugadzirwa kweHCN.
Midziyo yeGG Patent 2210286 inotendwawo semakemikari asina kukodzera kugadzirira HCN. HCN inogadzirwa nekuita ammonia uye gasi yehydrocarbon. Zvinozivikanwa kuti simbi inokonzeresa kuora kweammonia pakakwirira tembiricha. Zvinotendwa kuti iyo simbi irimo mune ferromagnetic musimboti uye mune chinotsigira kutsigira mukati mekupindirana mukamuri ye GB '286 ingakonzere kuora kweammonia uye yaizodzivisa, pane kukurudzira, kuda kunodiwa kweammonia ine hydrocarbon kuumba HCN.
Hydrogen cyanide (HCN) chinhu chakakosha chemakemikari ine mashandisiro mazhinji mumaindasitiri emakemikari nemigodhi. Semuenzaniso, HCN chinhu chisina kugadzirwa pakugadzira adiponitrile, acetone cyanohydrin, sodium cyanide, uye vepakati mukugadzira mishonga yekuuraya zvipuka, zvigadzirwa zvekurima, vanobiridzira, uye chikafu chemhuka. HCN chinhu chine huturu hwakanyanya hunotonhora pamadhigirii makumi maviri nematanhatu C., uye nekudaro, inoenderana nemirau yakaoma yekutakura uye yekufambisa. Mune kumwe kunyorera, HCN inodikanwa kunzvimbo dziri kure dziri kure nenzvimbo hombe dzekugadzira HCN. Kutumirwa kweHCN kunzvimbo dzakadai kunosanganisira njodzi huru. Kugadzirwa kweHCN kunzvimbo dzainofanira kushandiswa kunodzivirira njodzi dzinosangana nadzo mukufambisa, kuchengetedza uye kubata. Zvidiki zvidiki pane-saiti kugadzirwa kweHCN, uchishandisa yapfuura hunyanzvi maitiro, zvaisazogoneka mune zvehupfumi. Nekudaro, zvidiki, pamwe nezviyero zvakakura, pa-saiti kugadzirwa kweHCN inyanzvi uye nehupfumi inogoneka uchishandisa maitiro uye zvishandiso zvezvino zvigadzirwa.
HCN inogona kugadzirwa kana macompound ane hydrogen, nitrogen, uye kabhoni akaunzwa pamwechete panopisa zvakanyanya, iine kana isina chinogadzirisa. Semuenzaniso, HCN inowanzoitwa nekuita kweammonia uye hydrocarbon, maitiro ayo ari endothermic zvakanyanya. Aya matatu maitiro ekutengesa ekugadzira HCN ndiwo maBlausaure aus Methan und Ammoniak (BMA), iyo Andrussow, uye nemaitiro eShawinigan. Maitiro aya anogona kusiyaniswa nenzira yekupisa kupisa uye kuchinjisa, uye nekuti chinoshanda chinoshandiswa here.
Iyo Andrussow maitiro inoshandisa kupisa kunogadzirwa nekupisa kweye hydrocarbon gasi uye oxygen mukati meiyo reactor vhoriyamu kupa kupisa kwekupindura. Iyo BMA maitiro inoshandisa kupisa kunogadzirwa neyekunze mwenje maitiro kupisa iyo yekunze nzvimbo yeiyo reactor madziro, ayo ayo zvakare anopisa iyo yemukati yepamusoro yeiyo reactor madziro uye nekudaro inopa iyo kupisa kwekupindura. Iyo Shawinigan maitiro anoshandisa magetsi emagetsi achiyerera kuburikidza nemagetsi mumubhedha wakasvinwa kuti ape kupisa kwekupindura.
Mune iyo Andrussow maitiro, musanganiswa wegasi rechisikigo (musanganiswa wehydrocarbon gasi wakakwira mu methane), ammonia, uye oxygen kana mweya inoitwa pamberi peplatinum catalyst. Iyo inokonzeresa inowanzo kuve nematanho akati wandei eplatinamu / rhodium waya gauze. Huwandu hweoksijeni hwakadai zvekuti kupisa kwakasarudzika kwema reactants kunopa simba rakaringana kupisa preheat kune tembiricha yekushandisa inopfuura 1000 ° C. pamwe nekupisa kunodikanwa kwekuita kweHCN kuumbwa. Izvo zvinogadzirwa zvigadzirwa ndeye HCN, H2, H2O, CO, CO2, uye inoteedzera huwandu hweakakwira nitrites, ayo anofanirwa kuzopatsanurwa.
Mukuita kweBMA, musanganiswa weammonia uye methane inoyerera ichipinda mukati isina-porous zvedongo machubhu akagadzirwa neepamusoro tembiricha inoratidzira zvinhu. Iko mukati mechubhu yega yega kwakarongedzwa kana kuputirwa neplatinamu particles. Machubhu anoiswa mune yakanyanya tembiricha choto uye nekunze kupisa. Iko kupisa kunoitiswa kuburikidza neye ceramic rusvingo kune chinokonzeresa pamusoro, chinova chikamu chakakosha chemadziro. Mhinduro yacho inowanzoitwa pa1300 ° C. sezvo iwo maactant anosangana nekaturike. Iko kupisa kwekupisa kunodikanwa kwakakwira nekuda kwekukwirisa kwekuita tembiricha, iyo hombe kupisa kwekuita, uye chokwadi chekuti iko kwekukonzeresa pamusoro kunogona kuitika pazasi pekupindura tembiricha, iyo inogumisira iyo inokonzeresa. Sezvo chubhu yega yega inowanzoita 1 ″ dhayamita, huwandu hwakawanda hwamachubhu hunodiwa kusangana nezvinodiwa mukugadzira. Reaction zvigadzirwa ndeye HCN uye hydrogen.
Muchiitiko cheShawinigan, simba rinodikanwa pakuita musanganiswa une propane neammonia inopihwa nemagetsi emagetsi inoyerera pakati pemagetsi ekudonhedza mumubhedha wakanyoroveswa wezvinhu zvisina kugadzikana zvecoke. Kushaikwa kwechinokonzera, pamwe nekushayikwa kweoksijeni kana mweya, muchirongwa cheShawinigan zvinoreva kuti mhinduro yacho inofanira kumhanyisa pamatembiricha akanyanya, kazhinji inopfuura 1500 degrees C. Matembiricha akakwira anodikanwa anoisa zvipingamupinyi zvakakura pane zvishandiso zvekuvaka kwemaitiro acho.
Ipo, sezvakaziviswa pamusoro, zvinozivikanwa kuti HCN inogona kugadzirwa nekuita kweNH3 uye gasi yehydrocarbon, senge CH4 kana C3H8, pamberi peiyo Pt boka simbi inogadzirisa, pachine chikonzero chekuvandudza kushanda kwe maitiro akadaro, uye akafanana, kuitira kuti uvandudze hupfumi hwekugadzirwa kweHCN, kunyanya kugadzirwa kudiki. Izvo zvinonyanya kukosha kudzikisira kushandiswa kwesimba uye kubuda kweammonia nepo ichiwedzera huwandu hwekugadzira hweHCN tichienzanisa nehuwandu hwesimbi inokosha inokonzeresa yakashandiswa. Zvakare, iyo inokonzeresa haifanire kukuvadza kugadzirwa kweHCN nekusimudzira zvisingadiwe kuita sekukochekera. Zvakare, inoshuviwa kunatsiridza chiitiko uye hupenyu hwemakemikari anoshandiswa mune ino maitiro. Sezvineiwo, chikamu chikuru chekudyara mukugadzirwa kweHCN chiri muboka replatinamu. Izvozvi zvigadzirwa zvinopisa zvinokonzeresa zvakananga, pane kuita zvisina kunangana sezvakaitwa muhunyanzvi hwepamberi, uye nekudaro zvinowedzesa izvi desiderata.
Sezvakambokurukurwa, zvakadzikira zvakadzama kupisa induction kupisa kunozivikanwa kupa kuenzana kwakanaka kwekupisa kupisa pamatanho emagetsi epamusoro kuzvinhu zvine hurefu hwakareba hwekufambisa magetsi Paunenge uchipa iyo yekuita simba kune endothermic gasi chikamu chinogadzirisa maitiro, kupisa kunoda kuendeswa zvakananga kune chinokonzeresa ne kushomeka kwesimba kurasikirwa. Izvo zvinodikanwa zveyunifomu uye zvine hunyanzvi kupisa kuendesa kune yakakwira-pamusoro-nzvimbo, gasi-inokwenenzverwa catalyst mass inoita kunge inopesana nehunyanzvi hwekupinza induction. Iyo yazvino kugadzirwa kunoenderana nezvisingatarisirwe mhedzisiro inowanikwa neyakagadziriswa reactor umo iyo chinokonzeresa ine inoverengeka chimiro chimiro. Iyi fomati inosanganisa maficha e: 1) yakanyatsoreba magetsi conduction nzira kureba, iyo inofambisa inoshanda yakananga induction kudziyisa kweiyo catalyst nenzira yunifomu, uye 2) chinogonesa chine yakakwirira nzvimbo nzvimbo; zvinhu izvi zvinoshandira pamwe kuti zviite endothermic chemical reaction. Kushaikwa kwakazara kwesimbi mukamuri yekuita kunobatsira kugadzirwa kweHCN nekuita kweNH3 uye gasi rehydrocarbon.
Induction kudziyisa midziyo reactors